नेपाल आज | कोरोनाभाइरस चीनको प्रयोगशालामा बनाइएको हो ?
कोरोनाभाइरस चीनको प्रयोगशालामा बनाइएको हो ?
आइतबार, ०७ बैशाख २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले दूतावासका अधिकारीहरूसँग गरेका कूटनीतिक पत्राचार वा कुराकानीमा उनीहरू चीनको वुहानस्थित भाइरस प्रयोगशालाले अपनाएको जैविक सुरक्षाका उपायलाई लिएर चिन्तित रहेको पाइन्छ ।
सो प्रयोगशाला कोरोनाभाइरसको पहिलो प्रकोप देखिएको शहरमा रहेको छ । जहाँबाट कोरोनाभाइरस रोगको उत्पत्ति भएको थियो र अहिले विश्वमा माहामारीको रुपमा फैलिएको छ ।
उक्त नयाँ भाइरस मानवनिर्मीत भएको समाचारहरु बारेमा पनि चर्चा हुँदै आएका छन् । केही समयअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भाइरस उक्त प्रयोगशालाबाट बाहिरिएको बताएसँगै यी विषयलाई अमेरिकी सरकारले नियालिरहेको बताएका थिए।
त्यसोभए यो पछिल्लो विकासक्रमले वर्तमान महामारीको हाम्रो बुझाइमा के जानकारी वा ज्ञान थप्छ त ?
वाशिङ्गटन पोस्ट पत्रिकाले कूटनीतिक पत्राचारबाट प्राप्त जानकारीबारे समाचार बनाएको छ। उसका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकी विज्ञान कूटनीतिज्ञहरूलाई चिनियाँ अनुसन्धान केन्द्रमा पटकपटक पठाइएको थियो ।
ती अधिकारीहरूले प्रयोगशालामा अपर्याप्त सुरक्षा रहेको चेतावनीबारे वाशिङ्गटनलाई दुईपटक पत्राचार गरेर जानकारी गराएका थिए।
साथै ती कूटनीतिज्ञहरू सो प्रयोगशालाले चमेरामा हुने कोरोनाभाइरसको अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसले सार्सजस्तो महामारीको जोखिम बढाएको उल्लेख गरेका थिए ।
अनलाइनमा त्यसबारे निकै चर्चा भएपनि सार्स-कोभ-२ भाइरस ,जसले कोभिड-१९,रोग गराउँछ, त्यो प्रयोगशालाबाट दुर्घटनावश बाहिर फैलिएको भन्ने कुनै प्रकारको प्रमाण भेटिएन ।
विश्वभरि भाइरस तथा ब्याक्टेरिया जस्ता जीवाणु अध्ययन गर्ने प्रयोगशालाहरूमा बीएसएल अर्थात् बायोसेफ्टी लेभल भनिने प्रणालीबद्ध रूपमा सुरक्षाका उपाय अपनाइएका हुन्छन् । खतराको स्तर हेरिकन प्रयोगशालाहरू बीएसएल १ देखि ४ सम्म वर्गीकरण गरिन्छन्।
(बीबीसी न्यूजका विज्ञान सम्पादक पल रिन्कनको लेखको भावानुवाद)